परिवारमा सुसंस्कारका सुत्रहरु - DibyaJyotish (दिव्य ज्योतिष)
परिवारमा सुसंस्कारका सुत्रहरु
असल विश्वको निर्माण असल व्यक्तिद्वारा मात्रै हुन्छ र त्यस्तो व्यक्तिको निर्माणको जग भनेको बाल्यावस्था नै हो । बाल्यकालमा रोपिएका बिउहरु नै क्रमशः झ्याङ्गिदै जाँदा असल व्यक्ति वा असल मानवको निर्माण हुन्छ ।
गीताको सोह्रौं अध्यायमा दैवी सम्पदा(Divine quality) भनी भगवान् श्री कृष्णले (क) मानवीय गुणहरुलाई सकारात्मक एवं नकारात्मक ( Negative/Positive) गरी दुइ भागमा वर्णन गरेका छन् । यही दैवी सम्पदालाई– (क) Positive attitude आदि नामले आधुनिक मनोविश्लेषकहरुले पनि व्याख्या गर्दै आएका छन् । दैवी सम्पदाको बीजारोपण गर्ने सर्वोत्तम काल भनेकै बाल्यकाल हो । यिनै दैवी सम्पदालाई (अभय, सात्विकता, ज्ञानयोग, दान, दम, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, सरलता आदि ) हाम्राँ पूर्वीय चिन्तकहरुले सुसंस्कार, सात्विकी वृत्ति आदि विभिन्न नामले व्याख्या गरेका छन् ।
बाल्यकालमा रोपिएका संस्कार स्थायी रुपले मानिसका हरेक आचरण र व्यवहारमा प्रतिविम्बित हुन्छन् । काँचो माटोको गाग्रीमा कोरिएका चित्रहरु जसरी टिकाउ (sustainable) हुन्छन् त्यसरी नै बाल्यकालमा रोपिएका संस्कारहरु, दैवी सम्पदाहरु आजीवन प्रतिविम्बित हुन्छन् –यन्नवे भाजने लग्नः संस्कारो नान्यथा भवेत् ।
बाल्यकाललाई सुमधुर, सुव्यवस्थित एवं सुप्रभावकारी बनाउनका लागि परिवार व्यवस्थाको (family system ) को ज्यादै ठूलो महत्व हुन्छ । असल परिवार नै असल सन्तानको आधार हो भनी ठोकुवा गर्न सकिन्छ । यही असल परिवारलाई सम्मानित गर्नका लागि हाम्रा पूर्वीय चिन्तकहरुले ‘धन्यो गृहस्थाश्रमः’ भनी निर्देशन गरे । यही असल एवं आदर्श परिवारको दृष्टान्त बुझाउनका लागि हामी श्रीराम, श्रीकृष्ण आदिका कथाहरु पढ्दछौं, सुन्दछौं ।
शिक्षा, सीप आदिको मूल आधार स्कूल हो भने संस्कारको मूल आधार परिवार नै हो । अर्थात् प्रत्येक बच्चाका लागि परिवार यस्तो पाठशाला हो जहाँ उसले संस्कार सिक्छ, जीवनको जग बनाउँछ, दैवी सम्पदाको बिउ रोप्छ । ती बच्चाहरु भाग्यमानी हुन् जसले त्यस्तो परिवार प्राप्त गर्छन् र ती आमाबुवाहरु सहस्र धन्यवादका पात्र हुन् जसले त्यस्तो सुन्दर परिवार व्यवस्थालाई कायम गर्छन् ।
तर दुर्भाग्य ! आज परिवार व्यवस्था क्रमशः टुट्दैंछ । हाम्रो पूर्वीय संस्कृतिको मूल आधार नै परिवार हो । तर आज त्यही क्रमशः विखण्डित हुँदैछ । मलाई के लाग्छ भने परिवारले संस्कृति बचाउँछ र संस्कृतिले परिवार बचाउँछ । यी दुवै अन्योन्याश्रित (interdependent) छन् ।
क) अभयं सत्वसंशुद्धिज्र्ञानयोगव्यवस्थितिः ।
दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् ।।१।।
अहिंसा सत्यमव्रmोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् ।
दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह«ीरचापलम् ।।२।।
तेजःक्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता ।
भवन्ति सम्पदं दैवीमभिजातस्य भारत ।।३।। (गीता–१६, अ.१–३)
किन कमजोर बन्दैछ त हाम्रो पारिवारिक व्यवस्था ? यसबारे पनि केही विचार गरौं ।
–पूर्वीय दर्शन र संस्कृतिको सही ज्ञानका अभावले ।
– भौतिकवादी चिन्तनका प्रभावले ।
–पश्चिमेली आडम्बरी संस्कृतिका प्रभावले ।
–सस्तो खाले मूल्यहीन मिडियाका मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमको प्रभावले ।
–आर्थिक÷भौतिक समस्याका कारणले ।
–तीव्र महत्वाकांक्षा र विलासी जीवनका प्रभावले ।
–विविध सामाजिक विसंगतिका कारण ।
–यान्त्रिक जीवनको प्रभाव बढ्दै जानाले ।
– अस्वस्थ राजनीतिक कारणले ।
तर जे जस्तो भए तापनि धन कमाउने नाममा, सुखद् जीवनको आशामा एवं पश्चिमेली चकाचौंधको प्रभावमा हामीले आफ्नो परिवार व्यवस्था भने गुमाउनु हुँदैन । पश्चिमी मुलुकका मानिसहरु यही परिवार व्यवस्था गुम्नाले आज रोइरहेका छन्, अनेकौं सामाजिक विसंगतिको शिकार भइरहेका छन् । भनिन्छ, अमेरिकामा मात्रै करिब ८० प्रतिशत परिवार अव्यवस्थित, अप्राकृतिक वा अमर्यादित (unnatural family) छन् रे । यस्तै असन्तुलित परिवारका कारणले आज पश्चिमेली समाजमा अनेकौं डरलाग्दा समस्याहरु देखिएका छन् । जस्तैः
–डिप्रेसन, फस्टेसन तथा अन्य मानसिक रोगहरुमा वृद्धि
–हत्या, हिंसा, अपराधका घटनाहरु
–सम्बन्ध विच्छेद तथा आत्महत्याको बढ्दो संख्या
––लागू पदार्थ, दुव्र्यसन तथा घरेलु हिंसाका घटनाहरुमा वृद्धि
–सुस्त मनस्थिति एवं मानसिक विचलन भएका बच्चाहरुको संख्यात्मक वृद्धि ।
–स्वार्थी एवं व्यक्तिवादी प्रवृतिको दिनानुदिन वृद्धि ।
–बच्चाहरुमा एक्लोपन, उदासीपन, भय, लज्जा, संकोच आदिको विकास
नेपालको शहरी जीवन पनि तीव्र गतिले यस्ता खाले कुसंस्कारबाट प्रभावित हुँदैछ । भूमण्डलीकरणले गर्दा हामीले साइन्स र टेक्नोलोजीको क्षेत्रमा धेरै फाइदा पाएका छौं भने चिन्तन र संस्कारका हिसाबले धेरै कुरा गुमाउँदैछौं । आधुनिक यन्त्रहरुको प्रभावले जीवन यान्त्रिक बन्दै गएपछि मानिस मान्त्रिक बन्न सक्दो रहेनछ । बौद्धिकताको विकास हुँदै जाँदा हार्दिकता क्रमसः गुम्दो रहेछ । बुद्ध हराएको छ, युद्ध मौलाएको छ । पानी महङ्गो भएको छ, युद्ध सस्तो भएको छ । जीविकाको स्तर बढ्दो छ, जीवनको स्तर घट्दोछ । दलीय चिन्तन बढ्दै छ, मानवीय मूल्य घट्दै छ । कतै चर्को प्रकाशले आँखा तिरमिराएका छन्, भने कतै निस्पट्ट अन्धकारमा आँखा टोलाएका छन् । कतै अट्टहासमा हाँसो हराएको छ भने कतै आँशुमा हाँसो डुबेको छ । कतै धेरै हुँदा कसरी सम्हाल्ने भन्ने चिन्ता छ भने कतै केही नहुँदा कसरी गुजार्ने भन्ने चिन्ता छ ।
यस लेखको मूल प्रसंग भने बालवालिकाको सर्वाङ्गीण विकास नै हो । त्यसमा पनि विशेष गरेर नैतिक विकास, चारित्रिक विकास, ज्ञानको विकास, भावनाको विकास, स्वस्थ मनोविज्ञानको विकास आदि । शैक्षिक प्रतिस्पर्धाको दौडमा संस्कार कसरी कायम गर्ने ? जीविकाको खोजीमा जीवन मूल्य कसरी कायम गर्ने ? सफल बन्ने क्रममा असल कसरी बन्ने ? सिंगो विश्वलाई अंगाल्ने क्रममा आफ्नै माटोलाई कसरी सपार्ने ? आदि अनेकौं महत्वपूर्ण प्रश्नहरु आज शैक्षिक जगत्मा देखा परेका छन् । परिवारका कयौं सदस्यहरु भने यो त स्कूलको जिम्मेवारी हो एवं राज्यको दायित्व हो भनी आँखा चिम्ली आफ्नै अन्धो दौडमा निरन्तर दौडिरहेका छन् ।
विशेष गरेर अमेरिका, युरोप जस्तो विदेशी मुलुकमा जन्मेका वा सानै उमेरमा विदेशिएका हाम्रा नेपाली बच्चाहरुलाई कसरी सन्तुलित जीवनको आधार दिने ? भन्ने एक ज्यादै ठूलो चुनौती नै छ । विदेशिएका नेपालीहरुलाई ‘यी त आखिर विदेशिएका त हुन् नि’ भनी हामीले आँखा चिम्ले पनि हुन्छ तर साथै ‘यी हाम्रै बच्चाहरु हुन् र भोलि कुनै न कुनै रुपले नेपाल फर्कने छन्’ भनी स्वीकार्दा पनि हुन्छ । मैले स्वयं अमेरिका र युरोपको भ्रमणकालमा कैयौं ठाउँमा समर क्याम्पहरु लगाउँदै जाँदा एक सुखद् आशाको अनुभूति गर्दै आएको छु । ‘प्रवासमा रहेका यी बच्चाहरुले पनि नेपाल सम्झने छन् र नेपाल आमाको सेवामा एक दिन हातेमालो गर्ने छन्’ भन्ने मधुर कल्पनाले एक दरिलो स्थान बनाएको छ मेरो मनमस्तिष्कमा । त्यसैले प्रवासमा रहेका यी कलिला बच्चाहरुको जीवनलाई सुसंस्कारित गर्नका लागि केही गम्भीर, दूरदर्शी एवं इमान्दारितापूर्ण प्रयास गर्नै पर्छ । जस्तैः
–यी बच्चाहरुलाई नेपाली भाषा र साहित्यको बाल्यकालदेखि नै अभ्यास गराउने, त्यसका लागि घरमा आमाबुबाले अनिवार्य रुपमा नेपाली भाषा नै बोल्ने ।
–हाम्रो सनातन संस्कृति र संस्कारका लागि बाल्यकालदेखि नै समुचित ज्ञान दिने, त्यसका लागि दशैं, तिहार, माघी, छठ, ल्होसार, तीज, रामनवमी, कृष्णाष्टमी, बुद्धजयन्ती, शिवरात्री आदि पर्वहरु यथासम्भव आफ्नै परिवारमा वा समाजमा मिलेर मनाउने ।
– नेपालीहरुको राम्रो बस्ती भएको ठाउँमा अनौपचारिक शिक्षाका रुपमा Sunday Nepali School सञ्चालन गर्ने ।
–नेपाली बहुल क्षेत्रमा सानै भए पनि आफ्नै मन्दिर वा सांस्कृतिक केन्द्र बनाउने ।
–वर्षमा कम से कम एक पटक भाषा, साहित्य र संस्कृतिको विशेष प्रशिक्षण दिने उद्देश्यले summer camp को आयोजना गर्ने ।
–नियमित रुपले विभिन्न घरहरुमा ÷टोलहरुमा पालैपालो संध्याकालीन सत्संगको आयोजना गर्ने । जसमा भजन, कीर्तन, प्रार्थना, वन्दना, कथा, प्रवचन आदिको व्यवस्था गर्ने ।
–लामो विदा भएको बेलामा योजनाबद्ध रुपले सुव्यवस्था सहित यी बच्चाहरुका लागि नेपाल दर्शन ÷भ्रमणको आयोजना गर्ने ।
उपयुक्त बुँदाहरु बाहेक सुसंस्कारको विकासका लािग आमाबुवाले एवं परिवारका सदस्यहरुले स–साना जीवन सूत्रहरुमा पनि अत्यन्तै ध्यान पु¥याउनु पर्छ । Value based educaton, Holistic Approach of education, Alternative education, Home schooling system आदि जति पनि नयाँ—नयाँ शैक्षिक अभियान पश्चिमी जगत्मा पनि देखा पर्न थालेका छन् ती सबैको मूल उद्देश्य पनि मानवीय मूल्यको संरक्षण, संवद्र्धन गर्नु र बालहरुमा सुसंस्कारको विकास गर्नु नै हो । सुसंस्कारको विकासका लािग बालमनोविज्ञानलाई बुझ्नु अति आवश्यक छ र तदनुरुप आमाबुवा आदि परिवारका विशिष्ट सदस्यहरुको सदाचारमा विकास र घरपरिवारको वातावरणमा सुव्यवस्था हुनु अति आवश्यक छ । ठूलाले जे जस्तो गर्छन्, सानाले त्यसकै अनुसरण गर्छन् भनी गीताले पनि स्पष्ट भनेकै छ । (ख) अतः यी केही सूत्रहरुलाई ध्यानमा राख्दा उपयुक्त हुनेछ । जस्तैः
–जथाभावी T.V. को प्रयोग गर्न नदिने ।
–Video Game को दुष्प्रभावबारे सचेत गराउने ।
–आमाबुबाले बच्चाहरुसँग सकेसम्मसँगै भोजन गर्ने ।
–आमाबुवाले वा कुनै एकले बच्चासँग बढी समय बिताउने, उनको कुरा सुन्ने, उनको मनलाई बुझ्ने ।
–महिनामा एक वा दुई पटक केही घण्टाका लागि भए पनि परिवारका सबै सदस्यहरु कुनै सुन्दर मर्यादित, प्राकृतिक ठाउँमा घुम्न जाने ।
–प्रकृतिमा रम्ने, खेल्ने वातावरणको सृजना गरिदिने ।
–ज्ञानवर्धक एवं चरित्रप्रधान पुस्तक आदिको व्यवस्था मिलाइदिने ।
–असल संगीसाथीसंग पढ्ने, खेल्ने, घुम्ने वातावरण मिलाइ दिने ।
–योग, ध्यान, गीतापाठ, भजन–कीर्तन, प्रार्थना आदिको व्यवस्था घरमा दैनिक अथवा कम्तिमा हप्तामा एक
पटक गर्ने ।
–बच्चाको रुचि र क्षमता अनुसार नृत्य, संगीत, खेलकूद, चित्रकला, स्वीमिङ आदिको व्यवस्था मिलाइदिने ।
–सकेसम्म सात्विक एवं प्राकृतिक भोजनको व्यवस्था मिलाइदिने ।
ग) ‘‘यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तन्त्तदेवेतरो जनः । स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते” ।। गीता
–घरमा देवीदेवता, महापुरुष राष्ट्रिय विभूति आदिका चित्रहरु सजाउने ।
–सानै भए पनि पूजाकोठा वा पूजा गर्ने थलोको व्यवस्था गर्ने ।
–बच्चासँग कुरा गर्दा अत्यधिक सचेत भई सकारात्मक कुरा मात्रै गर्ने ।
–बच्चासँग नेपालका बारेमा सुन्दर आशावादी कुराहरु मात्रै गर्ने ।
–बच्चाबच्चीका सामु आफ्नो झगडा, आफ्नो कमजोरी एवं परिवारका टीकाटिप्पणी आदि नगर्ने ।
यी कुराहरु हेर्दा, पढ्दा वा सुन्दा अत्यन्तै साना छन् तर मनोविज्ञानका हिसाबले सुसंस्कारको विकासका लागि साना कुराहरु नै ज्यादै प्रभावशाली हुन्छन् । मदर टेरेसाले ”We do small things but with great love ” भनेको पनि यही हो । यी स–साना जीवन सूत्रहरु अमेरिका, युरोप आदि मुलुकहरुमा बस्ने नेपाली परिवारलगायत नेपालकै शहरी जीवनमा रम्नेका लागि पनि लाभदायी हुनेछन् । सम्पत्ति कमाएर सन्तति गुम्यो भने के गर्ने ? शिक्षाको दौडमा संस्कार गुम्यो भने के गर्ने ? दुनियाँलाई हेर्ने, बुझ्ने नाममा आफ्नै देश छुट्यो भने के गर्ने ? ग्लोबल फ्यामिलीको नाममा आफ्नै परिवार गुम्यो भने के गर्ने ? यस्ता कैयौं प्रश्नहरु छन्, जसबारे समयमै सचेत हुनु अत्यावश्यक छ । सन्तुलित उत्तर खोज्नु आवश्यक छ साथै दूरदर्शी एवं आशावादी भई सुदृढ पाइला चाल्नु अत्यन्तै आवश्यक छ ।
वेदकाे इतिहास ७००० वर्षभन्दा पनि पुरानाे